Shirka Maamul U sameynta oo Goordhaw ka furmay Jowhar iyo Wasiiro ka qeyb galaya-Sawiro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabeelaha Hoose, ayaa sheegaya in halkaasi maanta gaareen Wasiiro katirsan Xukuumada Federaalka Soomaaliya , waxaana wafdigan si diiran Jowhar ugu soo dhaweeyay Maamulka Gobolka Sh/Dhaxe iyo Waxgarad.
Wafdiga Wasiirada waxaa Hogaaminaya Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Odawaa , waxaana wafdiga ku jira Wasiirka Amniga Qaranka iyo Wasiiro kale oo katirsan Xukuumada Federaalka Soomaaliya.
Wasiiradan ayaa xiligan ku sugan xarunta lagu qabanayo shirka maamul u sameynta Gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe oo Goordhaw shirku ka furmay, waxaana hada hoolka xaruntaasi kasocda Khudbado kala duwan oo la jeedinayo.
Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumada Soomaaliya Odawaa , ayaa ka dhawaajiyay in shirka wajigiisa labaad uu maanta si rasmi ah u furmay ayna rajeenayaan in uu dhawaan kasoo baxo natiijo lagu farxi karo.
Xarunta Shirka ka furmay waxaa hada kasocota munaasabada furitaanka Wajiga Labaad ee shirka maamul u sameynta Gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe , waxaana munaasabada Khudbado ka jeedinaya Masuuliyiin katirsan Dowlada iyo waxagardka shirkaasi ka qeyb galaya.